Mogadishu Journal » Nairobi: Ciidamada oo galay xawaaladaha Soomaalida
Mjournal ;-Wararka ka imanaya magaalada Nairobi ayaa sheegaya in ciidamada amnigu ay gudaha u galeen qaar ka mid ah xafiisyada shirkaddaha xawaadaha Soomaalida ee ku yaalla xaafadda Islii.
Xoghayaha guddiga ganacsatada Soomaalida Islii, Cumar Axmed Nuux ayaa goor dhaweyd VOA u sheegay in ciidanku ay gudaha u galeen shirkaddaha xawaaladaha oo ay baarayaan.
Talaabadan ayaa imanaysa, iyadoo dowladda Kenya ay shalay u diiday inay dalkeeda galaan wasiir ku-xigeenka batroolka Cismaan Libaax iyo Senator Ilyas Xasan, iyo Zamzam Daahir oo ka tirsan aqalka Sare, kuwaasi oo maanta dib ugu noqday magaalda Muqdisho.
Dhinaca kale, dowladda Somalia ayaa ka baaqatay shir maanta lagu waday inay ka qeybgasho oo ka dhacayay magaalada Nairobi.
Mamulka Jubbaland oo Ka hadlay darbiga ay Kenya ka dhiseyso xadka Soomaliya